အွန်လိုင်း မိုဘိုင်းဈေးရောင်းပွဲတော် Mobile Week တွင် အထူးအစီအစဉ်များဖြင့် ရောင်းချလျက်ရှိ
Shop.com.mm မှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ အွန်လိုင်းမိုဘိုင်းဖုန်းအရောင်း ပွဲ Mobile Week ကို စတင်ကျင်းပနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဈေးရောင်းပွဲတော်ကို ဇွန် ၂၇ ရက်မှ ဇူလိုင် ၃ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အွန်လိုင်းမိုဘိုင်းဈေးရောင်း ပွဲတော် Mobile Week ကို ပါဝင်ဆင်နွှဲ လိုသူတွေအနေနဲ့ ဒီနေရာမှ တစ်ဆင့် ဝင်ရောက်နိုင်သလို Shop.com.mm app ကို Android နှင့် Apple ဖုန်းများတွင် download ဆွဲယူပြီးလည်း ပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Application ကနေတစ်ဆင့် ဝယ်ယူလိုသူတွေ အနေနဲ့လည်း ၅ ထောင် ထပ်လျှော့ပေးတဲ့ voucher code တွေ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အွန်လိုင်းမိုဘိုင်း ဈေးရောင်းပွဲတော် Mobile Week မှာ မိုဘိုင်းဟန်းဆက်တွေကို ဈေးလျှော့ရောင်းချပေးလျက်ရှိသလို Phone accessories များကိုလည်. ၉၀% အထိ လျှော့ဈေးတွေနဲ့ ရောင်းချပေးလျက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Shop.com.mm မှကငျြးပပွုလုပျတဲ့ အှနျလိုငျးမိုဘိုငျးဖုနျးအရောငျး ပှဲ Mobile Week ကို စတငျကငျြးပနပွေီ ဖွဈပါတယျ။
ဒီစြေးရောငျးပှဲတျောကို ဇှနျ ၂၇ ရကျမှ ဇူလိုငျ ၃ ရကျအထိ ကငျြးပသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။ အှနျလိုငျးမိုဘိုငျးစြေးရောငျး ပှဲတျော Mobile Week ကို ပါဝငျဆငျနှဲ လိုသူတှအေနနေဲ့ ဒီနရောမှ တဈဆငျ့ ဝငျရောကျနိုငျသလို Shop.com.mm app ကို Android နှငျ့ Apple ဖုနျးမြားတှငျ download ဆှဲယူပွီးလညျး ပါဝငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ Application ကနတေဈဆငျ့ ဝယျယူလိုသူတှေ အနနေဲ့လညျး ၅ ထောငျ ထပျလြှော့ပေးတဲ့ voucher code တှေ ရရှိနိုငျမှာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
အှနျလိုငျးမိုဘိုငျး စြေးရောငျးပှဲတျော Mobile Week မှာ မိုဘိုငျးဟနျးဆကျတှကေို စြေးလြှော့ရောငျးခပြေးလကျြရှိသလို Phone accessories မြားကိုလညျ. ၉၀% အထိ လြှော့စြေးတှနေဲ့ ရောငျးခပြေးလကျြရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။